डा. तारानाथ शर्माको जीवन : मृत्युलाई थप्पड दिन मन लाग्छ | Ratopati
personकुवेर गिरी exploreकाठमाडौं access_timeसाउन ११, २०७६ chat_bubble_outline2
डा. तारानाथ शर्मा साहित्यकार, समालोचक र पाठ्यपुस्तक लेखक पनि हुन् । उनी नेपाली भाषा र साहित्यमा झर्रोवादी आन्दोलनका अगुवा भनेर समेत चिनिने गरेका छन् । दोस्रो भाषाका रुपमा अङ्ग्रेजी शीर्षकमा विद्यावारिधि गरेका शर्मा लामो समय प्राध्यापन पेसामा समेत आबद्ध रहे ।
इलामको बरबोटेमा १९९१ मा जन्मिएका रुद्री, चण्डी, वेद, अमरकोश र ज्योतिषसम्बन्धी अध्ययन समेत गरेका उनले आफ्नो सम्पादन, लेखन र अनुवादमा थुप्रै कृति दिएका छन् । अमेरिकाको विस्कन्सिन विश्वविद्यालयबाट भाषाविज्ञानमा विद्यावारिधि गरेका उनका समालोचनाहरूमा घोत्ल्याइँहरू, भानुभक्तदेखि तेस्रो आयासम्म, सम र समका कृति आदि हुन् । यसका अतिरिक्त नेपाली साहित्यको इतिहास, नेपाली साहित्यको ऐतिहासिक परिचय छन् ।
उनका उपन्यासहरुमा सुली, मेरो कथा, ओझेल पर्दा, झझल्को, नेपालदेखि अमेरिकासम्म र पश्चिमका केही महान साहित्यकार लगायत करिब १३६ वटा पुस्तक प्रकाशित छन् । शर्माले कृति ‘बेलाइततिर बरालिँदा’का लागि २०२६ सालमा मदन पुरस्कार पाएका थिए । यसको अलवा, साझा पुरस्कार २०२९, रत्नश्री स्वर्णपदक २०२३, सर्वश्रेष्ठ पाठ्यपुस्तक लेखन पुरस्कार २०३९ लगायत थुप्रै पुरस्कार र सम्मान हात पारेका छन् । यी नै तारानाथ शर्मासँग मेरो जीवन स्तम्भका लागि गरिएको कुराकानीः
नेपाली खाना दालभात, तरकारी नै मनपर्छ । तर, अचेल दालभात खान्न । यो खायो भने पेट दुख्न थाल्छ । यसको सट्टा अहिले चिउरा, केरा र घिउमा मुछेर खाने गरेको छु । मन नपर्ने भन्ने केही छैन ।
पकाउने काम मैले कहिल्यै गरिनँ । पहिले आमाले पकाउनु हुन्थ्यो । त्यसपछि दिदीबहिनीले पकाए । विवाह भएपछि श्रीमतीले पकाउन थालिन् । उनले त मलाई भान्सामा छिर्न दिन्नन् । रेस्टुरेन्ट जाने गरेको छु । मानिसहरुले राम्रो राम्रो रेस्टुरेन्टमा लैजान्छन् । रेस्टुरेन्टको भुटेको मासुहरु, पकाएको मासुका परिकार मनपर्छ ।
मनपर्ने पोसाक दौरासुरुवाल नै हो । पहिले पहिले दौरासुरुवाल र टोपी सधैँ प्रयोग गर्थें । दौरासुरुवाल सबै प्रकारको लगाउँछु । म सानैदेखि अङ्ग्रेजी स्कुलमा पढेको मानिस । त्यसैले सटपाइन्ट पनि लगाउँथे । वर्षमा २, ३ जोर लुगा सिलाए पुग्छ । यस हिसाबले भन्नुपर्दा वर्षमा १०, १२ हजार पोसाकमा खर्च छ ।
पहिले पहिले योग गर्थें । अहिले बुढेसकाल लागेकाले होला अल्छी लाग्छ । पहिले पहिले धेरै हिँड्थे । अहिले घुँडा दुख्ने भएकाले घरमा मात्र हिँड्छु । बिहान सूर्यलाई नमस्कार गरेर आललम बिललम गर्छु ।
म अध्ययन गर्न रुचाउने मानिस हुँ । मेरो अध्ययनको कुनै सीमा छैन । म पढिरहन रुचाउँछु । तर केही वर्षयता म एकदमै अल्छी भएको छु । घुँडालगायत शरीरका विभिन्न भाग दुख्न थालेका छन् । त्यसैले पनि पुस्तक पढ्न अल्छी लाग्छ । पत्रपत्रिका सधैँ बिहान नियमित पढ्छु ।
सबैभन्दा बढी रुचिको विषय घुमफिर हो । पहिले मेरो आफ्नै गाडी थियो । मैले आफै ड्राइभिङ गरेर जति घुमे, त्यो थोरैले घुमेका होलान् । इङ्ल्यान्ड, युरोप, आएरल्यान्ड मेरो जति कमैले घुमेका होलान् । अमेरिकाको त कुरै भएन । कुनाकुनासम्म पुगेको छु । देशको सबै जिल्ला पुगेको छु । एसएलसीको सुपरटेन्डेन भएर पनि धेरै जिल्ला घुमे ।
पहिला पहिला घुम्न एकदमै मनपथ्र्योे । सरकारी खर्च तथा आफ्नो खर्चमा देशको पूरै ठाउँ पुगेको छु । आफै गाडी चलाएर समेत धेरै ठाउँ पुगेँ । उमेर ढल्किँदै गएपछि पैसा खर्च गर्न पनि गाह्रो हुँदो रहेछ ।
अहिले फुर्सदै फुर्सद छ । पत्रपत्रिका पढेर बस्ने हो । घरको काम गर्न केही सकिँदैन । पहिले त फुर्सद भयो कि लेख्थेँ । एक दुई वर्षयता घुँडाको समस्याले लेख्नसमेत अल्छी लागेर आउँछ ।
खेलकुदमा खासै रुचि छैन । मलाई सानैदेखि खेल्न इन्ट्रेस्ट थिएन । टीभीमा खेल हेर्न मनपर्छ । टीभीमा आउने गेम हेर्नेगरेको छु । फुटबल हेर्छु, बुझ्छु । क्रिकेट पनि कहिलेकाहीँ हेर्छु । तर बुझ्दिन । समय बिताउनका लागि टीभीमा आउने खेलकुद काम लागेको छ ।
आजको दिनसम्म मैले मोबाइल बोकेको छैन । छोराले बोक्छ । श्रीमतीले बोक्छिन् । म बोक्दिनँ । मोबाइल हेरेर, मोबाइल बोकेर पनि कोही कम्युनिकेसन गर्छ । आफै गर्नुपर्छ भन्ने मेरो मान्यता हो ।
टीभी हेर्न मनपर्छ । दैनिक हेर्छु । मैले टीभीमा हेर्ने भनेको खेलकुद, समाचार, देशविदेशका घटना, साहित्यिक खबरलगायतका लागि हो । टीभीमा हेर्न बढी मनपर्ने खबर र इन्टरभ्यु नै हो । बिहान, बेलुका, दिउँसो जुनै समय पनि फुर्सद भयो कि टीभीको अगाडि हुन्छु ।
अलिअलि चलचित्र हेरेको छु । पहिले धेरै चलचित्र हेर्थें । मेरो विषय नै नेपाली र अङ्ग्रेजी हो । पहिले नेपाली हिन्दी र अङ्ग्रेजी फिल्म हेर्थें । अहिले हलमा गएर हेर्दिनँ । घरमा बसेर हेर्छु । टीभीमा आएका नेपाली, हिन्दी, अङ्ग्रेजी सबै प्रकारको फिल्म हेर्न मनपर्छ ।
केही रोग छन् । अहिले घुँडा धेरै दुख्छ । नाथे सुगर भनेको उहिलेदेखि थियो । यसको नियमित औषधि खान्छु । सुगर भएपछि ब्लड प्रेसर नहुने कुरो भएन । यसको पनि औषधि खाइरहेको छु ।
नेपाली शुद्ध, प्रष्ट बोल्न र सुन्न मनपर्छ । मलाई धर्मराज थापा, बालकृष्ण सम, लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, लेखनाथ पौडेल, धरणीधर कोइराला, पारसमणि,सबै मेरा साथी जस्तै हुन् । उनीहरुको भाषाशैली बढी मनपर्छ । चाकडी, चाप्लुसी गरेर बोलेको ठीक लाग्दैन ।
गीत सङ्गीत मनपर्छ । प्रशस्तै सुन्छु । नेपाली गीत सङ्गीत बढी सुन्छु । पुराना, नयाँ, लोक आधुनिक सबै प्रकारका सुन्ने गरेको छु । जीवनका लागि आनन्द दिने, सुख दुःखको साथी पनि हो गीत सङ्गीत ।
प्रेम, विवाहपछि श्रीमतीसँग गरे । छोराहरु जन्मिए उनीहरुलाई गरे । साथीभाइसँग गर्छु । त्यो बेग्लै खालको प्रेम हो । कुनै महिला, केटी र स्वास्नी मानिसलाई गर्ने प्रेम अर्कै हो । म कलेज पढ्थे, पढाउँथे यो क्रममा केटीहरु पनि थिए । उनीहरुले पनि मन पराउँथे । दार्जिलिङको पनि म स्ट्यान्डर कलेजमा पढेको व्यक्ति । त्यहाँ पनि केटीहरु थिए । धेरैले माया गर्थे । यो मामलमा म भने अगाडि बढिनँ ।
मिति ठ्याक्कै याद भएन । एसएलसी गरेदेखि म प्रोफेसर पेसामा छु । मेरो अङ्ग्रेजी र नेपाली राम्रो भएकाले एसएलसीपछि पढ्दै र पढाउँदै जीवन अगाडि बढाएँ । त्यतिबेला सुरु भएको यो यात्रा अहिलेसम्म पनि जारी छ । केही समयदेखि भने आफू अस्वस्थ भएर पढाउन जान छाडे । मेरो पेसा अङ्ग्रेजी र नेपाली पढाउने हो । पढाउन रमाइलो लाथ्यो ।
भूल नगर्ने कोही हुन्छ र ? जानी नजानी गरियो होला । भूलबाट सिक्ने हो । स्कुलमा पढ्न टिचरहरुले कहिले काहीँ भुलै नगरी सजाए दिएका छन् ।
नेपाली भाषाको उन्नति होस् । सबैले शुद्ध नेपाली बोल्न, सिक्न पाऊन् । सबै विद्वानको शुद्ध नेपाली होस्, देख्न पाइयोस् भन्ने एउटै सपना छ । हाम्रो धेरै विद्वानको नेपाली शुद्ध हुँदैन र छैन पनि । धेरै लेखकको नेपाली अशुद्ध भएको मलाई थाहा छ । कसरी भन्नु, भन्न पनि मिल्दैन ।
मदिरा म खाँदै खाँदिन थिएँ । लक्ष्मीप्रसाद देवकोटा, बालकृष्ण समसँग बस्दा एक दुई पटक अलिकति खाऊ भनेर खान थालेँ । जो पायो त्यहीसँग बसेर खान्न । मेरो ससुरा पर्ने नवराज सुवेदी भन्ने हुनुहुन्छ । उहाँसँग भेट भयो भने ल्याइहाल्नु हुन्छ । अनि हामी सुरु गर्छाैं । हामी जुन पायो त्यही रक्सी खाँदैनौँ । ब्ल्याक लेबल र ग्रिन लेबल मात्र खान्छौँ ।
राशि मेरो तुला हो । मैले ज्योतिष पनि पढेको छु । ग्रहदशा विश्वास लाग्छ । म अलिअलि जान्दछु पनि । सधैँ राशिहरु पढ्छु । श्रीमती छोरा, नातिहरुको राशि हेरेर पनि भन्छु । राजकुमार सुवेदी भन्ने मेरो अनन्य मित्र हुनुहुन्छ । उहाँको गाडीमा पनि म हिँडिरहेको हुन्छु । पूजापाठ हाम्रो धर्म हो । गर्छु र पहिले पनि गर्थें ।
मृत्य राक्षस हो । म त्योसँग झगडा गर्छु । किन त्यो चाँडै आउँछ । मेरो बुबालाई लग्यो, आमालाई लग्यो, भाइलाई लाग्यो । मेरो भाइ इन्जिनियर थियो । अहिले बसिरहेको घर उसले नै डिजाइन गरेको हो । मृत्युलाई थप्पड दिन मन लाग्छ । मृत्युदेखि रिस उठ्छ ।
July 28, 2019, 6:41 a.m. Bimal Soti
के भन्छन यी बुढा | लक्ष्मी प्रसाद देबकोटा पनि मापसे गर्थे र भन्या ? कतै type mistake त होइन ?? कतै पढेको थिए देबकोटा बुढा बनारस गएको बेला पनि भान्छा गर्नको लागि सजिलो हुन्छ भनेर बाहुनकै डेरा मा बस्थे भनेर |
July 27, 2019, 4:14 p.m. Nabin karki
Kreepaya wahaanko lekh padhnuhos. Bisudda Nepali bolaun ra bolna sikaun. Aadarniya agrajharulaai samman garaun Ra wahaanharukaa rastriya ikshyaharulaai puraa garaun Ra khushikaa laharharu phijaaidim.
कलाकार बसुन्धरा भुसालको जीवन : विवाहपछि कलाकारितामा अगाडि बढ्न सजिलो भयो
यसरी जन्मियो जीवनकै आशा गुमाएकी सविताको ‘होप क्याफे’
सामाजिक सञ्जाल चलाउने धनराज ‘स्टाइल’
नवनियुक्त महिलामन्त्री पार्वत गुरुङद्वारा पदभार ग्रहण
ट्याक्सी चढेर सिंहदरबारबाट बाहिरिए गोकर्ण विष्ट (भिडियो)